Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - Ny Teniny
Ara-tantara, ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito dia mifototra ao amin'ny Baiboly. Ny Advantista dia vahoaka iray izay manorina ny finoany amin'ny Baiboly. Vahoaka mamaky ny Baiboly, vahoaka mino ny Baiboly.
Ny fahitana izany indrindra no nanetsika ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito hanangana ilay tetikasa lehibe "Velomin'ny Teniny" izay novolavolain'ny komitin'ny "Fifohazana sy Fanavaozana" hanamafisana indray ny fanadramana ara-panahy ny mambra tsirairay ao amin'ny Fiangonana.
"Ny fandinihana ny Tenin'Andriamanitra, mitarika amin'ny fanandramana miaraka amin'ny Jesosy izay manova ny fiainantsika no fototra ho amin'ny fifohazana" hoy indrindra ny fanazavan'i Mark Finley Filoha lefitry ny Fiangonana Maneran-tany misahana ny Asa Fitoriana.
"Tsy misy mahasolo ny Feon'andriamanitra izay miteny amintsika amin'ny alalan'ny Teniny." araka ny fanamafisan'i Armando Miranda Filoha lefitry ny Fiangonana maneran-tany
"Miraikitra amin'ny vovoka ny fanahiko; Velomy aho araka ny Teninao." Salamo 119 : 25
"Fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny voa mety ho lò, fa tamin'ny tsy mety ho lò, dia ny Tenin'Andriamanitra, izay velona sady maharitra." 1 Petera 1 : 23
"Ary ankehitriny izaho manolotra anareo ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny tenin'ny fahasoavany, izay mahay mampandroso sy manome lova anareo eo amin'izay rehetra nohamasinina." Asan'ny Apostoly 20 : 32
Noho izany ny fandinihina ny Tenin'Andriamanitra dia mametraka ireto zavatra telo lehibe ireto izay mitarika amin'ny Fifohazana.
1- Manome fototra amin'ny fifohazana marina
2- Manaitra, manosika ary manohana ny fifohazana marina
3- Manafoana ny fiheveran-diso amin'ny fifohazana.
Araka izany dia tsy misy mahasolo ny Feon'Andriamanitra sy ny Teniny. Ny vavaka sy ny fandinihina lalina ny Soratra Masina dia loharon-kery ara-panahy.
Famintinana ny tetikasa :
Manomboka ny 17 aprily 2012, andro voalohany fanombohany komitin'ny lohataona ao amin'ny Foibe Advantista maneran-tany dia hasaina ny mambra ny Fiangonana tsirairay hamaky na hihaino toko iray ao amin'ny Baiboly isan'andro.
Miara-dalàna amin'izany, ny Filohan'ny Fiangonana maneran-tany sy ny Filohan'ny Diviziona dia hamaky ny toko voalohany ao amin'ny Genesisy, mandritra ny fanokafana io komitin'ny lohataona 2012 io, ary hamarana izany miaraka amin'ilay tetikasa "Velomin'ny Teniny" amin'ny famakiana ny toko faha 22 amin'ny Apokalipsy mandritra ny fivoriambe fiheveran-draharaha ny Foibe Fitantanana ny Fiangonana ny taona 2015 izay atao any San Antonio (Texas)
Manomboka amin'io komity ny lohataona 2012 io ka mandra-pahatongan'ny fiatombohan'ny fivoriambe fiheveran-draharaha ny 2 Jolay 2015, ny mpandray anjara rehetra dia manana 1171 andro hamakiana ireo toko manodidina ny 1189 ao amin'ny Baiboly.
Ny famakiana toko iray isan'andro ary roa mandritra ny fivoriambe fiheveran-draharaha ny Fiangonana maneran-tany dia anapitrisany ireo mambra hahatanteraka ity fiarahana amin'ny Baiboly ity. Hisy ny pejy manokana hosokafana ao amin'ny tranokalan'ny "Fifohazana sy Fanavaozana", izay tohanan'ny Fikambanan'ny Mpitandrina, pejy izay ahafahan'ny mpandray anjara rehetra mamosaka ny heviny.
Ny tetikasa "Velomin'ny Teniny" dia tsy mihanona fotsiny amin'ny famakiana na fihainoana toko iray isan'andro, fa kosa misarika ny sain'ny mambra rehetra ny mahazava-dehibe ny fahafantarana an'i Jesosy amin'ny alalan'ny Teniny. Mampirisika ihany koa ny fianakaviana mba hiara-hamaky izany. Amin'ny faritra sasany izay mbola mananosarotra ny famakiana ny Baiboly noho ny antony kolotsaina, dia mampirisika indrindra ireo loholona mba hamory ny fianakaviam-ben'ny Fiangonana mba ahafahana mamaky ny Baiboly amin'ny feo mafy. Tsotra, mora hampiarina nefa hahazoana tombony kokoa.
"Velomin'ny Teniny" dia mety hampiray ny Fiangonana manontolo manodidina ny Tenin'Andriamanitra ary mety hitondra fiovana lehibe eo amin'ny fianan'olona anapitrisany. Hery manosika bebe kokoa ho amin'ny fandinihina mirindra sy manarapenitra ny Baiboly. Ny tanjona dia ny hampahery ny mambran'ny Fiangonana ahafahan'ny Fanahy Masina manavao ny fiainany rehefa misaintsaina sy mivavaka ny amin'ny toko iray ao amin'ny Baiboly isan'andro.
"Tiako ny manasa ny mambran'ny Fiangonana mba hifandray amin'ny fianakaviamben'ny Fiangonana Advantista manerantany amin'ny famakiana toko iray isan'andro ao amin'ny Baiboly, manomboka ny 17 aprily 2012 ka hatramin'ny fivoriambe fiheveran-draharaha ny Fiangonana manerantany ny taona 2015. Resy lahatra aho fa izao fiarahana mamaky ny Baiboly izao dia hampifanantona kokoa antsika amin'ny Jesosy.
Rehefa mamaky sy misaintsaina ny Tenin'Andriamanitra amin'ny toetsaina vonto-bavaka isika dia mitarika antsika hiaina fanandramana amin'ny fahaterahana indray miaraka amin'ilay Mpamonjy antsika izany, izay hiandrasantsika fatratra ny fiveranany indray." Ted N.C. WILSON
Afaka vakinao eto ny toko sy andininy isan'andro
Hafatry ny Filohan'ny IOUM
Nandika teny : Heriniaina Randriamalala